Mary Sharpe na Press Pre-TRF - Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Mary Sharpe na Press Pre-TRF
Echiche Mary Sharpe maka ụdị ntọala iji mee ka nyocha sayensị banyere ịhụnanya mmekọahụ n'ihu ọha buru ụzọ mee ka ọ pụta ìhè na 2006. N'afọ ahụ Meri gosipụtara akwụkwọ banyere "Mmekọahụ na ictionictionụ Ahụhụ" na Nzukọ International nke Positive Psychology nke atọ na Portugal. Internetntanetị malitere ịmalite ike na ụmụ akwụkwọ na-esiri ya ike iguzogide ihe ndọpụ uche ahụ. Gụgharia agụụ mmekọahụ wee dị 'na mgbata' site na 2007 n'ihu. Mary na ndị ọrụ ibe ya malitere nyochaa mmepe na nsogbu metụtara ahụike, mmekọrịta na mpụ na afọ ndị sochirinụ. O doro anya na ọha na eze, ndị na-eme ihe ike na ndị na-eme mkpebi chọrọ nnweta sayensị dị nro nke na-amalite ịpụta banyere mmetụta nke ịntanetị na omume na ebumnuche ndụ anyị.
Mary Sharpe malitere ịrụ ọrụ na mmetụta nke ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na mmekọrịta ịhụnanya ọtụtụ afọ tupu e guzobere Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ ahụ dịka ọrụ ebere nke ndị Scotland.
Na ibe a anyị na-egwu ala n'elu ụlọ nchekwa ahụ iji mee ka anyị ghọtakwuo echiche mbụ nke mere ka Mary na-emepe Atụmatụ Ụgwọ.
N'ime ọnwa ndị na-abịanụ anyị ga-agbakwunye ihe mbido n'oge iji gosi njem anyị.
Maka nkọwa zuru ezu na Mary, lee akwụkwọ akụkọ ya Ebe a.
A ga-ebuso agha megide ịkpọasị na iri mmadụ ahụ n'ụlọ akwụkwọ '
Ọ bụ James Glassop sere ya
Nkeji edemede nke Hamish Macdonell, 11 June 2011.
Ejikọtara ejima abụọ nke ịkpa ụrọ na ihe riri ahụ ọnụ, ekwesịrị ịkọwara ya ụmụntakịrị dị ka afọ iri, dị ka onye ọkachamara ụwa nke mkpebi esemokwu.
Ndị ozi ejirila nlezianya nabata ọkpụkpọ ahụ, site n'aka Mary Sharpe, onye na-akwado maka mba ụwa, ka a kụziere ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ na Scotland banyere ihe ize ndụ ịrọ òtù, yana n'ihe ize ndụ nke mmanya na ọgwụ ọjọọ. Ha abụọ kwenyere na ha nwere njikọ chiri anya.
Ms Sharpe alọghachila Scotland n'oge na-adịbeghị anya mgbe ọ nyochasịrị nyocha nke radieshon nke ndị Alakụba na-eto eto maka Nato. Ọ chọrọ iguzobe etiti iji dozie esemokwu na Edinburgh nke, na-ele anya, ga-enyere aka luso ọgụ megide ịkpa ụrọ.
O kwenyere na ịkpa oke na ịkpa ókè na Scotland jikọtara ya na Nsogbu nke mba nke riri ahụ - ọkachasị mmanya - yana o kwenyesiri ike na ma ihe riri ahụ na mkpebi esemokwu ga-abụrịrị usoro ọmụmụ ma ọ bụrụ na Scotland ga-abụ mba na-anabata ihe.
Onye nkwuchite nke Mịnịsta mbụ, onye ga-ebipụta akwụkwọ iwu iji gbasaa ịhapụ ụrọ n'izu na-abịa, kwuru na Ms Sharpe pụtara ọtụtụ ihe iji nye arụmụka ahụ. O kwuru, sị, "Anyị ga-achọsi ike ime nke a ma hụ ihe ọ ga-ekwu."
Alex Salmond emeela ọgụ megide ịkpa ókè bụ ihe dị mkpa maka ọchịchị ọhụrụ ya na iwu mbụ ga-abụ iwu mgbochi ịkpa ókè, nke ga-ewepụtara ya n'ihu nzuko omeiwu ahụ n'izu a.
A na-atụ anya na Billkpụrụ ahụ ga-eme ka oge mkpesa kacha njọ maka mpụ ịkpọasị maka ịkpa ókè site na ọnwa isii ruo afọ ise, mebie iwu ịntanetị nke ịkpọasị okpukpe na ngosipụta nke ịkpa ókè na egwuregwu bọọlụ.
Mazị Salmond tụgharịrị na ịrọ òtù mgbe mmụba n'ọtụtụ nsogbu na egwuregwu Old Firm n'oge gara aga na mgbe bọmbụ ndị a na-enyo enyo zigara Neil Lennon, onye njikwa Celtic, na ndị nkwado abụọ dị elu nke klọb ahụ.
Onye ozi mbu ahụ jikọtara nsogbu mmanya mmanya na ịkpa ókè na mpaghara mgbe ọ wepụtara ihe ndị kacha mkpa maka ọchịchị ọhụrụ ahụ n'ụlọ omebe iwu Scottish n'ọnwa gara aga. Mazị Salmond kwuru, sị: “Sectarianism na-eji ụkwụ aga aka na aka, opekata mpe otu akụkụ, na ihe otiti ọzọ nke nchekwa anyị na obi ụtọ - ọdịnala.”
Ms Sharpe kwuru na obi dị ya ụtọ na Mr Salmond achọpụtala isi ihe jikọrọ njikọ dị n’etiti ihe riri ahụ na ịkpa ụrọ na mbo ọ na-eme iji dozie nsogbu ahụ ma o kwuru na ya nwere olile anya na nhoputa nke ochichi SNP ọhụrụ ahụ ga-enye ohere iji wee rụọ ọrụ a aka ya. . O kwuru, "Enwere m obi ụtọ na mgbanwe nke ihu igwe na Scotland na njikere dị ugbu a maka mba ahụ ịgakwuru ndị mmụọ ọjọọ ya."
Ms Sharpe kwuru na Scotland nwere nsogbu riri ahụ na mmanya, nicotine, ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị, ọgwụ ọjọọ, ịgba chaa chaa na nri junk - nke a, ka o kwusiri ike, nyere aka ịkwalite obodo ahụ ruo na elu nke tebụl ụwa maka ọrịa, ịda ogbenye na oke ibu. “Scotland nwere otu nsogbu. Anyị bi n'ọdịbendị na-egbu egbu, "o kwuru.
Ọ gbakwụnyere na naanị otu ụzọ a ga-esi dozie nsogbu ndị a bụ ịgbanwere usoro ọmụmụ ụlọ akwụkwọ ahụ wee kuziere ụmụaka gbasara ihe riri ahụ na ịkpa ụrọ site na afọ iri. Anyị kwesịrị ịbanye n'ụlọ akwụkwọ.
Ọ sịrị, "Anyị ga-akuzi ndị nkuzi ka ha wee mee ka ụmụaka mara ihe na-eme, ha nwekwaa ike imetụta ndị mụrụ ha."
Ọ gbakwụnyere, sị: “A zụlitere m na West nke Scotland. Ahụrụ m nke a mgbe m na-etolite ma ọ ka dị nso. ”
Ms Sharpe kwuru na agbanyeghị na ime ihe ike n'ụlọ na-agbago elu mgbe emesiri egwuregwu Old Firm, ịrọ òtù abụghị ihe kpatara ya; kama ọ bụ ngosipụta nke nnukwu nsogbu mmekọrịta ọha na eze ndị ọzọ, gụnyere ịlisụbiga mmanya ókè. Ọ gbakwụnyere, sị: “Ihe ịma aka nke ndị na-atụbe iwu mere abụghị iji nweta obi na uche nke ụmụ anyị kama napụta ha. Nke a ga-eme nke a naanị site na mmụta. ”